Mudane Robot: waa taxane Geek ah oo aadan rabin inaad dhaafto | Laga soo bilaabo Linux
Mr. Robot: taxane Geek ah oo aadan rabin inuu ku seego
Waxaan ku bilaabayaa anigoo leh waxaan rajeynayaa inaanan sii deynin wax Qaswadayaal ah, ugu yaraan si ula kac ah XD.
### Waa maxay Mr. Robot
Maalmo ka hor ayaa saaxiib kula taliyay ** Mr. Robot **, oo ah taxane ay soo saartay ** USA Network ** silsilad, oo taabanaya mowduuc horeyba loogu soo qaatay taxane kale iyo filimaan laakiin leh qodob kala duwanaan ah: ** wax walba waa ka macquulsan yihiin **. Waxaan damcay inaan inyar sugo si aan go'aan shaqsi ah u gaadho, laakiin waan hayn kari waayey.
Waxyaabaha telefishanka qoslaya ayaa wali u soo baxaya kuwayaga oo yaqaan qaar ka mid ah Sayniska Kombuyuutarka isla markaana yaqaan in ka badan hal Nidaam Hawlgal. Waxaan ula jeedaa taxanahaas ama filimada halka ** magaca khaldan ee loo yaqaan Hackers **, ay ku galaan FBI-da ama shabakadaha NSA 2 ilbiriqsi, adoo adeegsanaya Nidaamyo Operating shaki leh xitaa Software aad u shaki badan, iyo halka Mouse-ku yahay aag aan jirin, waxay wax walba ku sameeyaan kumbuyuutarka, iyagoo bilaabaya 20 daaqadood oo aan kala sooc lahayn oo had iyo jeer muujinaya kuwa ay xiiseynayaan inay arkaan… Cajiib !!!
### Faahfaahinta isbedelka samaynaysa
Mudane Robot, ugu yaraan qaybtii ugu horreysay ee ay sii daayeen, tani maahan kiiska oo waxaa jira tafaasiil soo jiidaneysa dareen badan. Halyeeygeena, Rami Malek, oo sifiican ugu ciyaara jilaaga (oo loo yaqaan Eliot) sidaan u arko, waa "Hacker" habeenkii (wax u eg Feejignaan) iyo khabiir dhanka amniga ah maalintii.
Uma jabsado lacag, laakiin wuxuu dareensan yahay inay wax khaldan yihiin adduunkan. Wuxuu leeyahay dhibaatooyin la xiriira dadka kale marka laga reebo Angela, iyo xiriirkan ka dhexeeya dadka iyada oo loo marayo qaab muuqaal ama muuqaal ah, waa maaddo loo arko waxoogaa dhaliil ah. Laakiin aan tagno qaybta aan sida ugu badan u jeclaan doonno.
Kumbuyuutarradiisa oo dhan wuxuu ku isticmaalaa ** GNU / Linux ** oo leh ** GNOME **, tanna waxaa lagu sheegay cutubka, mana dhahayo, waxaad ku arki kartaa sawirrada soo socda:
Adeegyaashu waxay umuuqdaan inay adeegsanayaan ** Unix ** ama wax ka socda qoyska ** BSD **. Waxaan tan ku idhaahdaa amarrada la muujiyey, in kasta oo aanay dhib ahayn in la fahmo, haddana waxaan arki karnaa inaysan ahayn kuwii loo adeegsaday Linux, in kasta oo dabcan, la abuuri karo. Inta lagu guda jiro wadahadalka, ereyo farsamo caan ah oo caan ah ayaa mararka qaarkood la adeegsadaa, sida: Weerarrada DDos, Diidmada Adeegyada, Rootkits,… Iwm
Elliot malahan astaan ​​ku saabsan ** Facebook ** maxaa yeelay iyadu ma jecla, laakiin waxay leedahay ** Instagram **, labaduba waxay u adeegsadaan aalad cilmi baaris ah. Faahfaahin kale ayaynu arki karnaa marka la daalacanayo Facebook ama ** GMail **, in kasta oo xaqiiqda ah in isdhaafsigu ay aad ugu egyihiin kuwa aan ognahay, haddana waxaa jira isbadalo yar oo xagga naqshadeynta ah ama waxay ka tagayaan walxo gaar ah sida astaamaha iyo kuwa kale. Dabcan, haddii aan hakanno waxaan ku arki karnaa taas GMail tusaale ahaan, emayllada ku jira sanduuqa waxay xiriir la leeyihiin dhagarta ama dabeecadda ay jabsadaan.
Wuxuu leeyahay taleefan gacmeed (si cad ula socda Android) oo isagu ma ahan noocyada Hackers-ka caadiga ah ee ku gala koontooyinka dadka kale sixir, qodobo kala duwan oo ku jira cutubka koowaad waxaan arki doonaa sida uu u adeegsado ** Social Engineering **.
Marka laga soo tago qaybta tikniyoolajiyadda, waxaa jira barta bulshada, aragtida muhiimka ah. Mr Robot wuxuu leeyahay qoraal sifiican loo sharaxay, oo taabanaya arimaha aadka u taagan oo uu ku muujiyo jilaaga dhowr jeer. Iyagoon rabin inay wax badan horumariyaan, waxay arki doonaan fikirkaaga cad ee ku wajahan Steve Jobs, Blackberry ama shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda. Waxaa lagu arki karaa cutubkan, tusaale ahaan, in madaxda sare aysan isticmaalin GNU / Linux, laakiin haye, naftaada u arag.
Mudane Robot ayaa ballanqaaday, oo haddii cutubyada intiisa kale ay sidan oo kale marka hore yihiin, shaki la’aan wuxuu ka mid noqon doonaa taxanayaashayda aan ugu jeclahay. Dib ayaan kuugu soo celinayaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Mr. Robot: taxane Geek ah oo aadan rabin inuu ku seego
69 faallooyin, ka tag taada
Markii aan arkay qoraalka, waan soo dejiyey ... hadda raadi subtitles Isbaanish ah.
Waxay yiraahdaan taxanaha uma muuqdo wax xun haba yaraatee.
Subtitulos.es waad kaheleysaa 😀
Cinwaanada hoose waa kuwo horumarsan already Horay ayaan si gooni gooni ah ugu soo dajiyay laakiin ma aqaano sida loo adeegsado 😮, intee buuq badan yahay, ma taqaanaa sida ay taasi u shaqeyso?
Kahor intaadan kufakarin ku-meelgaarka subtitles-ka ee leh subtitleeditor ama gnome-subtitle ama leh cinwaanka wax ka beddelaya cinwaanka hooyo ee KDE oo aanan hadda xusuusan magaciisa, laakiin in muddo ah halkaan, ay ku qoran tahay in koodhku maqan yahay oo barnaamijyadan midkoodna uusan jirin Waxaa loo isticmaalaa in lagu waafajiyo, haddii qof ogyahay mid kuu oggolaanaya inaad aragto fiidiyowga intaad iswaafajineysid, ha la socodsiiyo.
Adeegso Smplayer player-ka kuu oggolaanaya inaad isku dubbariddo cinwaannada, hagaajinta ama dib u dhigista iyaga oo aan u baahnayn inaad wax ka beddesho.
Waxaan ku hayaa iyaga oo isku dhafan, waxaan ku siin doonaa isku xidhka weyn link
Ku jawaab Karlisle
Waxaa jira kanaal IRC ah oo ku yaal freenode.net #mrrobot si looga hadlo taxanaha, oo Ingiriisi ku cad. Waan ku martiqaadayaa tan iyo maanta waxay sii deynayaan qeybta labaad. Fadlan, ku xir IRC meesha laga soo galo, xarfaha cagaaranna ku leh asalka madow 😉
Ku jawaab Kevlar555
Waxaa jira channel ka socda tv-ga si aad u awoodo inaad aragto ... ama sugto in lagu soo rogo durdur ... maaddaama waa goorma goorta gudbinta ay si sax ah u soo geleyso waqtigaas irc ...
Tixdani runtii way wanaagsan tahay, sidaad u leedahay ma jiro vertigo ama konsollo saddex-cabbir leh - oo ah qaabka isdaba-joogga ah ama filimka Swordfish - iyo kuwa kale oo badan, tan wax waliba waxay ku dhacaan waqtiga dhabta ah. Qabso bilowga. Aad ayey u xun tahay inaan sugno illaa 24-ka Juun cutubka soo socda.
Marka laga hadlayo amarrada gundhigga ah, waxaan qaarkood ku tijaabiyay terminal-ka aniga oo aan ku guuleysan xD, hase yeeshe isticmaalka 'ps' waa wax iska caadi ah, isticmaalka tuubooyin badan.
Waxa aanan go'aamin karin ayaa ah nooca terminal ee uu u adeegsanayo sawirka 5 - waa eterm - laakiin waxaan ula jeedaa is dhexgalkaas, waxaan horeyba ugu arkay filimka 'Awoodda shanaad' ee ku saabsan Julian Assange marwalba way isticmaalaan. Waxay u egtahay isdhexgalka 'Htop' laakiin aan lahayn F9 = Dila, haddii aysan jirin waddo loo maro saldhiga 'Htop' mooyee; Awoodda shanaad waxaan u maleynayaa inay sidoo kale jirto 'mc' oo leh terminaal gudaha ah, sidoo kale ma aanan guuleysan.
Waxaan sameeyay qayb yar oo fiidiyoow ah halkaas oo inyar ka badan 2 daqiiqo halkee uun lagu sheekaysanayaa miiska-img. 3 iyo 4- Waxaan ka helay qaybtaas mid aad u qosol badan oo aan kuu soo diri doono, laakiin waxaan u arkaa inaadan waxba video dhigayn.
Waxaan aad ula dhacsanahay taxanahan ama filimada noocan ah, sida xaqiiqda ah ayaa ka fiican tan dabcan.
Waa la dhigi karaa, laakiin waxaa laga yaabaa in qaarkood ay u arkaan inay yihiin Qaswadayaal .. Dadku ha arkaan, maxaa yeelay qeybtaas wadahadalka waa mid aad u xiiso badan dabcan, ma sheegayo hahaha ..
Ma jiraa qof garanaya magaca barnaamijka lagu gubayo cd / dvd ee ay isticmaasho ????, (ma ahan mid cabsi badan ama k3b)
Kaliya waa is-dhexgal la abuuray.
Ku jawaab Yeezus
Waxay akhrinaysaa cd DVD sameeyaha iyo googling wuxuu soo baxayaa wax sameeyaha cd ddd wax la mid ah laakiin waxaan qiyaasayaa isbeddelada interface gnome oo marka laga reebo waa abuuraha cd DVD wax la mid ah sameeyaha laga helo google ...
Hagaag, waan ku khamaari lahaa K3b, in kastoo waxyar laga beddelay. Waxay umuuqataa runtii sida dhabta ah, in kabadan barnaamijyada kale ee gubida DVD ee aan ogahay uguyaraan.
Ku jawaab blonfu
Cutubka koowaad ee hufan haddii ay garanayaan sida taxanaha loogu qaato si wanaagsan ayey u fiicnaan doontaa su'aasha kaliya ee harsan ayaa ah inay jaraan sababta oo ah "ma hanto qiimeynta dhagaystayaasha" ee ay soo rogeen shabakadda telefishanka, waxaan rajeyneynaa inaysan baajin.
Haddii ay go'aansadaan inay u soo dejiyaan burcad-badeed ama laad iyo inay arkaan tirakoobka soo dejinta ... waxay ka qiimo badnaan doontaa dhagaystayaasha telefishanka, in kasta oo aan la iloobin kharashka ama faa'iidooyinka laga soo ururiyo TV-ga in ka badan durdurrada
Hagaag, sida xogta ku xusan, waxay soo degsatay fara badan durdurro, marka si loola dagaallamo burcad-badeednimada waxay ku soo rogeen kanaalkooda gaarka ah ee YouTube sharci ahaan iyo HD buuxa.
Markii aan akhriyay faalladaada waxaan u baxay inaan ka raadiyo YouTube, waan ku farxay markaan arkay inay run tahay iyo in ka sii badan markaan arkay inay soo dejiyeen nooc subtitles ah, laakiin markii aan isku dayay inaan soo saaro waxaan helay farriintan:
Qofka soo geliyay fiidiyowgaan ma uusan oggolaan in laga helo waddankaaga.
Waan ka xunnahay.
Mñeh, bilow fiican laakiin way cadahay inaysan wali fahmin.
Ma jiraan wax VPN ah oo aan hagaajin karin, inkasta oo aan rajeynayo maalinta ay fahmaan in xaddidaadaha [juqraafi ama nooc kasta oo kale] ay naftooda waxyeello u geystaan ​​halkii ay ka faa'iidi lahaayeen.
Waxaan sidoo kale uga tagayaa xiriiriyeyaasha halkan hoose kuwa xiiseynaya:
Iyadoo aan lahayn cinwaanno hoose: https://www.youtube.com/watch?v=JpxvvnWvffM
Iyada oo leh cinwaanno hoose: https://www.youtube.com/watch?v=VkFqE2wYFfk
Dhanka, faallooyinka waxay yiraahdaan kaliya qeybta ugu horeysa waxay ku jiri doontaa YouTube, markaa kaliya qaar ka mid ah clips iyo wareysi ayaa la soo gelin doonaa. 🙁
Haa. Balan qaad taxanahan. Waxaan ka helay qoraalka oo dhan iyo jilayaasha, waxaan arki doonaa sida ay u kobcayso cutubyada soo socda.
Fiiri boggan. Si aad noogu madadaaliso mr robot.
Miyaanay noqon doonin sidii Rambo 2 oo kale halka kuwa xun ay yihiin qaabkii loo jabsaday Snowden iyo Assage?
Waco Waco. Waad ku mahadsantahay soo gudbinta shabakada whoismrrobot.com runtii waxaan u maleeyay inay fiicantahay!
Waxaan ku bilaabay fsociety si aan u sameeyo Imtixaanka. Dhamaadka waxaan galayay amarrada soo socda. Su’aashu waxay tahay haddii Tijaabadu kaliya laga helo amarka koowaad, maadaama kuwa kale ee aan fiirsaday ay kaliya bixiyaan macluumaad. Iima cada aniga.
Waan ku faraxsanahay inaad wax ii sheegtid. Farxad!
Aan aragno marka aad timaaddo guriga si aad ula wadaagto, ha noqonin danaysi ... 🙂
Waxaan ku hayaa qolka jiifka, si sax ah maxaa yeelay faallooyinka ayaa aad u wanaagsan. Dabcan, sidoo kale waxaan aqriyay dib u eegista wanaagsan ee Marvel Daredevil waana mid aad u adag in la dheefshiido - in kastoo aan horay u ogaa inay tahay mowduuc kale. Waxaan qiyaasayaa inaan ku dari karo Hannibal, hehe.
Waxaan arkay cutubyada ugu horreeya ee Marvel's Dardevil ee ku yaal Netflix, runtuna waxay tahay inay aad uga fiican tahay filimka, kaas oo illaa hadda siinaya qoraal khasab ah oo aan fiicnayn.
Ku saabsan taxanahan, waxaan arki doonaa isla marka uu ka soo baxo Netflix ama kanaalka TV-ga.
Waxaan arkay 5 ama 6 cutub oo ka mid ah silsiladda, laakiin ma ogi, waxay ila tahay inay siyaabo badan u daallan tahay, in qorshayaashu ay u dhexeeyaan waxyaabo aan loo baahnayn. Waxaan daawanayaa taxane taxane ah imika, oo leh ficillo badan, haa, laakiin aniga ahaan kuma filna. Dabcan tani waa arrin dhadhamin ah; Anigu, tusaale ahaan, waxaan u jeclahay Hannibal cutubyadiisa oo ay ka buuxaan riyooyin, dhalanteed iyo dhadhan farshaxan oo aad u fiican, hehe.
Waxaan arkay Mudane Robot. Fikradayda waa ... ra'yigeygu waa isku mid dadka intiisa badan oo garanaya waxa aan ula jeedo ... otomatiga sax miyaa?
Waxa ugu fiican daqiiqadaha ugu dambeeya marka aad baaritaanka sameyneyso, waxaa daawanaya 4chan. Waxaan arkay cutubka koowaad taxane aad u wanaagsan oo aad u fiican, in kasta oo ay run tahay inay farsamo dheeri ah gelin karaan.
Ma xuma, in kasta oo ay tahay sida Matrix-ka oo aan lahayn saameyn gaar ah iyo xoogaa Dexter ah. Aan aragno cutubka 2aad waxa haya.
Taxanaha si fiican ayuu u rinjiyeey they Ma waxaa la talin doona Kevin Mitnick ama Mark Zukerberg?
Qaarkiin Ma ogtahay in sidoo kale ay jiraan taxanaha internetka ee CSI .. ??? waa sida 3 xilli.
Laatiin Ameerika, kanaalka AXN wuxuu marayaa xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee SCI: Cyber, in kasta oo runtu tahay in markii ay dib u abuuraan barnaamijyada kombuyuutarka, ay u sameeyaan si khayaali ah.
Kaliya filimka «Shabakada Bulshada» ayaa sidoo kale jira noocyadaas muuqaallo ah, inkasta oo ay si ficil ahaan ah u muujiyeen noocyadii ugu horreeyay ee KDE iyo Mozilla SeaMonkey (oo leh astaanta Iceweasel si looga fogaado khilaafaadka aasaaska Mozilla).
3 xilli? Marka nooca loogu magac daray Isbaanishka marka laga reebo inuu yahay xilli 1 waa xilli la soo dhaafay ¿?
Si buuxda ayaa lagula taliyay! Waa sida elav u yidhi mid ka mid ah taxanaha aan buunbuuninaynin farsamada ama is-dhexgalka, waxaan durba qiyaasi karaa elav oo farxad u boodaya markuu maqlo waxa uu jecel yahay KDE.
Runtii, waxa KDE waa tilmaam aad u fiican, inkasta oo xilligan la joogo, qalabkeyga kombuyuutarkeygu uusan awood u lahayn inuu fuliyo isdhexgalkaan (Waan sugi doonaa illaa ay xasilloon tahay oo aan ku raaxeysan karo illaa heer buuxa).
Waxaad isku dayday porteus, manjaro ama wifislax waxay leeyihiin noocyo aad u fudud oo kde ah oo aan galiyay 510mb oo wan (kiiskan porteus)
Maanta waxaan bilaabay inaan arko mahadsanid 😀
Taxane wanaagsan, inkasta oo waxa ay arkeen run ahaantii ay yihiin qaybtii tijaabada ahayd taxanaha laftiisa, oo la sii deyn doono 3 maalmood gudahood, iyo 27-ka Maajo, dhacdada tijaabada ah waxaa laga sii daayay adeegyo badan oo VOD ah oo khadka tooska ah ah (Waxaan ka shakisanahay in Netflix ay daabacday dhacdadan tijaabada ah ee cinwaanada Latin America).
Waxa indhahaygu qabanayaan waa magaca dhacdooyinka la siiyay taxanahan, oo tixraacaya qaababka fiidiyowga ee ugu caansan internetka.
Aad ayuu u wanaagsan yahay cutubka koowaad. Ma xasuusto barta kale ee aan ka akhriyey taxanahan iyo taabashada ayaan ka soo dejiyey. Jilaaga weyn waa mid aad muhiim u ah, doorka runti sifiican ayuu uqabtaa.
Waxaan u maleynayaa inay isku darayaan qadar ku filan oo farsamo iyo xaalado xiiso u yeelan kara qof kasta oo daawanaya taxanaha isaga oo aan aheyn farsamo-yaqaanno. Waxaan qiyaasayaa inay jiri doonaan cutubyo diiradda saaraya farsamada iyo kuwa kale oo yar. Waxaan ku kalsoonahay taxanaha maxaa yeelay waxay si wanaagsan u barteen barnaamijyada iyo OS ee ay tahay inay adeegsadaan si ay ula socdaan fikradaha halyeeyada, sidoo kale waa waqti xaadirkan in dadka ay ka walwalsan yihiin asturnaantooda iyo amnigooda ay si tartiib tartiib ah ugu wareegayaan software bilaash ah.
Waa la arki doonaa haddii ay ku guuleystaan ​​inay keenaan taxanaha xilli oo dhan si la mid ah heerka duuliyaha.
Taasina waxay ixasuusisay silsilad kale, oo aan si buuxda u daawanayay bishii hore: Joojin iyo Dab Qabad. Runta ayaa i niyad jabisay. Ka fogaanshaha qaswadayaasha, waxaan doonayay inaan ka faa ideysto fursada si aan uga faaloodo sida xun ee ay ku dambeysay. Waxay ku bilaabatay sifiican, iyada oo gabi ahaanba aysan jirin wax farsamo ah marka laga reebo ereyada hawada lagu tuuray, laakiin markii cutubyadu socdeen, qorshaha oo dhan wuxuu noqday sheeko Yankee ah. Halkii ay taxane ka ahaan lahayd "kacaankii pc" waxay ku dambaysay inuu ahaado "sidee baan u khiyaanayn karaa nolosha lammaanahayga." Waxaan arkay 2dii cutub ee ugu dambeeyay si aan u ogaado sida xilli ciyaareedku ku dhammaaday: AAD XUN 😛
Qofna ma arkay sidoo kale? Waxba kama seegana.
Jawaab Sergio S
Waxaan leeyahay kuwa leh dhibaatooyinka subtitles, kickass waxaa ku jira nooc leh subtitles isku dhafan, sidaa darteed kuma dhibidoonaan raadinta ama iswaafajinta. Waan dhigi lahaa xiriirka laakiin ma ogi haddii la oggolaan doono iyo in kale.
Xaqiiqdii waa, subtitulos.es waxaa jira qaar ku tiirsan daabacaadda fiidiyaha.
Sababtaas darteed helitaankeeda oo ku duuban fiidiyowga ayaa jaraynaya waqtiga dheeriga ah markii aad si gooni gooni ah u raadineysid ... midka aan helay waa 567 mb hdtv .avi. Go'aanka qaar ka mid ah sida ay u doonayaan inay u helaan si ay ugu keydiyaan darawalka adag.
Kaliya geek dijo
Taxane Kale oo Xisaabinta Xad-dhaafka ah ee Joojinta iyo Dab-damiska oo La Daawado
www youtube com / daawasho? v = vG5Q8ei3PBg
Jawaab Just Geek
Joog oo dab qaado, waan jeclahay, waa wax laga xumaado inaan had iyo jeer hurdo seexdo oo aan arko jajabyada 3 ama afar jeer…. gurigan waxaad ka daawaneysaa taxane aad u daahay 1 am
Xilli ciyaareedkii labaad ayaa la filayaa inuu soo baxo xagaagan, sax ??
Maaha wax aan waxba ka jirin, laakiin "Shabakadda USA" waa mid ka mid ah shabakadaha ugu muxaafidka ah waddanka ee dhibaateeya Assange iyo Snowden, uma maleynayo inay tahay mid hufan.
Haddii aan doonayo inaan ogaado waxa ay Hackers yihiin, waxaan arkayaa wareysi lala yeelanayo Assange, weligey ma arki doono filim Yankee ah, oo ah kan iyaga silciya.
Waxaan u maleeyay in xilligii ugu horreeyay ay doonayaan inay si tartiib tartiib ah u siiyaan fikrad khaldan ama xaaladdooda fikradda iyaga ku habboon iyaga oo wax ka qabta haakaristeyaasha ama qaab loola jeedo barafka barafoobay ... laakiin waa wax Maxaan qiyaasayaa ... waan sugi doonaa si aan u aragno waxa dhaca ... waxa aan weyddiinayo ayaa ah, haddii tani ay tahay dhacdo tijaabo ah, cutubka 01 wuxuu yeelan doonaa muuqaalo cusub ...
Wixii aan ka fahmay qoraalka ugu weyn ayaa laga sameeyay filim, kaas oo aan la sameynin isla markaana uu noqday taxanahan.
Cutubka tijaabada ayaa ah tan, waxay socotaa ugu yaraan 1 saac iyo daqiiqado bilaa xayeysiisyada, markay guud ahaan wax u eg yihiin 43 daqiiqo. Waxaa jira 9 cutub oo dheeri ah -sida aan ku aqriyay wiki-
Salaan sxb (duuliye)
Kuwa iyo eber
Socdaal geesi ah
Maalin eber ah
Waxaan dib u eegi doonaa taxanaha horeyba u daganaa ee bilaa dareenka ah bilawgii, waxaana laga yaabaa inaan wax ku qoro balooggeyga, in kastoo aanan ahayn dhaliilihii fiicnaa laakiin waxbaa soo bixi doona ... Waxaan la yaabanahay haddii kani yahay qoraal gaar ah ama ma waxay ku saleysnaan doonaan wax ... sida muuqata isbeddel ayey sameynayaan ....
+100 taxanaha ah, waxaan jeclahay dhagarta [haddii aysan wax iska beddelin ...]
Qaadashada su'aasha kumbuyuutarka, ma jiraa qof hela dagaal kooxeed?
Waxaan rajeynayaa inay ugu yaraan ufiicantahay sida IT Crowd-ka. Farxad!
Ku jawaab gaston_pdu
Taasi waa wax lagu qoslo, laakiin dhanka farsamada waxyaabo badan kuma laha hehe
IT Crowd xilliyadiisii ​​ugu dambeeyay waxay u istaagtay sameynta kaftan ku saabsan teknoolojiyada qaarkood (sida Windows Vista), laakiin ugu dambeyntii waxay maamushaa inay noqoto mid qosol badan.
Saaxiib, waxa kaliya ee aad sameysay waxay ahayd isaga inuu ka baaro internetka cutubyada kale sida waalan laakiin waxaan ogaaday inay sii deyn doonaan 7-da cutub ee soo socda laga bilaabo 1-da Luulyo, taxanahan weyn ee amarrada sida chmod, grep, iwm ayaa ka muuqda terminalkiisa! !! taxane weyn oo aan rajaynayo inuu ku siin karo jihada wanaagsan oo aanad ka dhigin waxyaabo ay ka mid yihiin jabsiga !!! mahadsanid !!
Jawaab Jonathan Diaz
Waa taxane aan hubo in aan daawado 🙂
Goorma ayuu soo bixi doonaa cutubka labaad? ... Waqti badan ayaa laga joogaa markii uu soo baxay cutubka koowaad.
1da Luulyo 😀
mahadsanid maadada http://cinemavf.org/serie/mr-robot.html
Ku jawaab gaspa
Haddii aad xiiseyneyso inaad raacdo taxanahan (iyo kuwa kale guud ahaan), waxaan kula talinayaa bulshada http://www.subadictos.net/foros/showthread.php?t=39762
Aniga ayaa isdiiwan galiyay sanado, waa meel aad ufiican oo aan raadino oo aan ka helno waxa aan dooneyno inaan aragno iyo cinwaanno hoose.
Ku jawaab eneas_e
Adorei o blog iyo foi a melhor matéria da series que eu li ate agora! Parabens.
Ku jawaab Flora
Waa taxane aad u xiiso badan, waan ka helay.
Ma jiraa qof og mawduuca aad u isticmaasho kombuyuutarkaaga? Waa la ogyahay inay isticmaasho Gnome laakiin taasi maahan muuqaalka asalka ah ee Gnome runtiina waxay umuuqataa mid aad ufiican
Waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan kulan / dood ku saabsan mawduuca ku yaal desdelinux, taxanahan ...
Uma maleynayo sidaas, laakiin waa la abuuri karaa, 'Cybercafe' .. 😀
Way dhacdaa inaan iska diiwaangeliyey golaha isla markaana isla meeshaas makhaayada internetka laga furay waxaan ka furay mawduuc ku saabsan taxanaha, in kastoo aan u maleynayo in ra'yigeygu ka duwan yahay ka dib markaan arkay cutubyada kale ee xD
Musalsalku si wanaagsan buu ku bilawday oo waa uu sii yaraanayay, malaha waxa jira layaab ama qalooc aan wali la fahmin, aan aragno. Wixii aan ku helay qosol waa bogga, whoismrrobot. Grub, Debian, iyo xulashooyinka menu-ka ee konsole, suuq-sameeyaha haa, laakiin waan ka helay.
Kuwa iska diiwaangeliyey bogga, Arbaco kasta waxay u diraan boodhadh xayaysiis ah ... xD
Waad salaaman tihiin asxaabta, ma garanayo cida kale ee raacaysa taxanaha, Laakiin sidee ufiican yihiin dhacdooyinka 8 iyo 9. runti taxane ah oo ka baxsan caadiga, ee aan ahayn Af-hayeenka Wanaagsan & Badbaadada xun
http://foro.desdelinux.net/viewtopic.php?id=4463 halkan waxaan ku qoreynaa waxyaabo ku saabsan taxanaha ... haddii cutubka 8 iyo 9 ay ahaayeen wtf ...
Cajiib .. Waxaan faafiyey faallo ka dibna markaan eegay taada waxaan arkaa inta qodob ee aan wadaagno .. sida iska cad qorayaashu way yaqaaniin cida ay tilmaamayaan ... waan idiin soo gudbin doonaa .. inaad sameyneysaan si fiican. Salaan.
Adiga oo arkay dhalashadii cajaladaha CD-ga ee SCSI, ama adiga aayadaa u badalay 4taas megabayt oo xasuusta ah 8 si ay ugu socodsiiso Windows 3.1, adiga oo xididada u siibay mobilkaaga oo aad ka soo saartay waayitaanka ka soo baxa warshada , ama adiga oo waligaa u isticmaalay aqoontaada dhijitaalka ah inaad u sameyso cadaalad, ama adiga oo og sababta uu virus ugu soo galay kombiyuutarka aad hagaajisay inkastoo uusan ceeb kuu sheegayn oo aad iska aamusto si aanad uga xumaan , ama adigu waad ogtahay waxa ay ka dhigan tahay, HADDII >> MARKAA, SUDO, Linux, IRC (Mirc…), Ping, Gacanqaad, BruteForceMethod, COMMAND.COM, Autoexec.bat… ama adiguba inaad keydisay kumbuyuutarka saaxiibkaa adoo galaya DOS iyo soo kabashada waxaan ku diiwaan geliyaa gacanta, ama adiga oo is casilaad ku arkaya sida mamnuuca kacaankii dijitaalka ahaa ee aan ku noolaanay 20 sano ka hor sida caadiga ah loo isticmaalo, ama adiga oo markasta oo aad aragto filimo wata mowduucyo internetka lagu daawanayo barnaamijyada iyo farsamooyinka la adeegsaday qarsoodi aan run ahayn, aan la heli karin ama xad dhaaf ah waxaad tahay qof firfircoon, ama adiga inaad joogtid haddii loo baahdo illaa 5 subaxnimo si wax nacalad u bilaabmo markale, ugu dambayntiina wuxuu bilaabmaa intaad arkayso falaadhaha qorraxda ee ugu horreeya oo muuqda ... Haddii aad ka mid tahay kuwaa, markaa taxanahan wax bay yeelan doonaan ama inbadan oo idinka mid ah, waxa fiicanna waxay tahay inuusan ku ekaanin wax walba oo aan hadda idin idhi.
Jawaab Fabian Kesler
xilliyada soo socda waxaad ku arki kartaa dhammaan cutubyada cinwaanada la turjumay. waxaad kala soo bixi kartaa nooca bulshada adigoo adeegsanaya ilo furan oo aad ka isticmaali karto shabakada tog ee gudaha https://khggyjxwn5hnc4ns.onion.to/Sida iska cad inaad kala soo baxdo waxaad u baahan doontaa tor browser laakiin tan waxaa loogu talagalay Linux markaa ... ku raaxeyso
Ku jawaab loki
[Dib u eegista Yar] Imtixaanka Solus Maalin kasta: 0.201528.6.0